Nonlinear Makristasi Fekitori - China Nonlinear Makristasi Vagadziri, Vatengesi
Kukura nzira dzinosanganisira yakatwasuka uye yakatwasuka, izvi zvinhu (ZnGeP2, AgGaS2, AgGaSe2, GaSe, KTA, KTP, BIBO, LBO, BBO) zviripo nemhando dzakayerwa uye kutariswa. Zvimwe zvacho, zvine zvivakwa zveakakura zvisina kukwana uye zviyero zvakasarudzika zvatakapa zvinoshandiswa zvakanyanya muSGG, THG uye Mid-infrared OPO, OPA masisitimu, nezvimwewo Zvigadzirwa zvinogona kuendeswa pamwe kana pasina Anodized Aluminium mubati.
Gallium phosphide (GaP) kristaro ndeye infrared optical zvinhu zvine yakanaka pamusoro kuomarara, yakanyanya kudziya conductivity uye yakafara bhendi kutapurirana.
Cr² +: ZnSe inogadziriswa macobbabha (SA) zvinhu zvakanaka zvekupusa Q-switch yemaziso-yakachengeteka fiber uye solid-state lasers inoshanda mune yekuratidzira renji ye 1.5-2.1 μm.
ZGP makristasi ane hombe nonlinear coefficients (d36 = 75pm / V), yakafara infrared pachena renji (0.75-12μm), yakanyanya kupisa kupisa (0.35W / (cm · K)), yakanyanya laser kukuvara chikumbaridzo (2-5J / cm2) uye zvakanaka machining chivakwa, ZnGeP2 kristall yainzi mambo we infrared nonlinear optical makristasi uye ichiri yakanakisa frequency kutendeuka zvinhu zveakakwira simba, inogadziriswa infrared laser chizvarwa. Tinogona kupa yakakwira mhando yehupamhi uye yakakura dhayamita ZGP makristasi ane yakanyanya yakadzika yekumwa coefficient α <0.05 cm-1 (pamapombi wavelengths 2.0-2.1 µm), iyo inogona kushandiswa kugadzira yepakati-infrared tunable laser ine yakanyanya kushanda kuburikidza neOPO kana OPA maitiro.
AGS iri pachena kubva pa0.50 kusvika pa13.2 µm. Kunyangwe yayo isina mutsetse optical coefficient ndiyo yakadzika kwazvo pakati pemakristal anotaurwa infrared, kureba kupfupi kwevelength pachena kuri kutenderera pa550 nm kunoshandiswa muOPOs dzakapomerwa neNd: YAG laser; mune akawanda mutsauko frequency kusanganisa kuyedza ne diode, Ti: Sapphire, Nd: YAG uye IR dhayi lasers inovhara 3-12 µm renji; mune yakananga infrared countermeasure masisitimu, uye yeiyo SHG ye CO2 laser. Akatetepa AgGaS2 (AGS) makristaro mahwendefa anozivikanwa kune ultrashort pulse chizvarwa pakati peiyo IR renji nemusiyano frequency chizvarwa chinoshandisa NIR wavelength pulses.
AGSe AgGaSe2 makristasi ane mabhendi mabhendi pa0.73 uye 18 µm. Yayo inobatsira kufambisa renji (0.9-16 µm) uye yakafara chikamu chinowirirana kugona inopa yakanakisa mukana weOPO kunyorera painoputirwa nemhando dzakasiyana dzakasiyana lasers. Tuning mukati me2.5-12 µm yakawanikwa kana uchipomba naHo: YLF laser pa2.05 µm; pamwe neisina-kukosha chikamu chinowirirana (NCPM) kushanda mukati me1.9-5.5 µm kana uchipomba pa1.4-1.55 µm. AgGaSe2 (AgGaSe2) yakaratidzirwa kuve inoyevedza frequency inopetwa sekristaro kune infrared CO2 lasers radiation.